विदेशमा उपलब्ध नहुने किसिमको सेवा सुविधा र रोजगार दिएको छु ,श्रेष्ठ टेलरिङ्गका सञ्चालक बाबुकाजी श्रेष्ठ - Today Express
“त्यति तलबले मेरो परिवारलाई खर्च धान्न अलि गाह्रो भयो । अनि तेही हुँदा खेरि मैले अरु अल्टरनेटिभ काम गरौँ अलि पैसा आउने काम गरौँ भनेर मैले यो काम सिकें अनि काम गरें”
“त्यति बेला महिनाको दुई तिन सय तलभ खान्थे अहिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ३०० जनालाई रोजगारी दिएको छु “
नेपालबाट अहिले दैनिक ४०० सय जनाको हाराहारीमा युवा युवतीहरु रोजगारको लागि विदेश पलायन भैरहेको अवस्था छ । नयाँ पुस्ताका युवा युबतिहरुले स्वदेशमा अवसर नदेखेर देशले यो नियति भोग्नु परेको हो । यस्तो परिवेशमा स्वदेशमै लामो समयदेखि झन्डै ३०० जनालाई रोजगारी दिंदै आइरहनुभएका एक सफल व्यबसायी एवं नेपालकै पहिलो सर्टिंग सुटिंग कम्पनी श्रेठ टेलरिंगका सन्चालक श्री बाबुकाजी श्रेष्ठ संग रेडियो डर्बीमा गरिएको अन्तरंग कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । बिक्रम सम्बत २०१० साल भदौ ५ गते काठमान्डौको चाबहिलमा बुबा शेर बहादुर श्रेष्ठ र आमा न्हुछे माया श्रेष्ठको सुपुत्रको रुपमा श्री बाबुकाजी श्रेष्ठको जन्म भएको थियो । २०३१ सालबाट अर्थात् सन् १९७५ देखि श्रेष्ठ टेलरिंग सेन्टरको व्यवसाय स्थापना गरेर आज सम्म यहि व्यवसायलाई निरन्तरता दिंदै आउनु भएका श्रेष्ठ संगको कुराकानी ……………..
प्रश्न – यो जिबनको लामो यात्रा तय गरिसक्नु भएको छ, जिबनको पैसठ्ठीऔं वर्ष पार गरिसक्दा अहिलेको समाज र ६ दशक अगाडिको समाजमा कस्तो परिवर्तन पाउनु हुन्छ ?
बाबुकाजी श्रेष्ठ – आकास जमिनको फरक छ । पहिला अब नेपालमा रेडियो भनेकै एउटै मात्र रेडियो नेपाल । थियो ,टेलिभिजन पनि २०४१ सालतिर मात्रै आयो । अब अहिले त रेडियो गन्नै नसकिने छन् तेस्तै टेलिभिजन पनि कति हो कति , प्रविधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने संचारले नै संसारलाई नजिक बनाइदिएको छ ।धेरै परिबर्तन आइसकेको छ ।अब पहिला खेल्नको लागि घर बाहिर गएर खेलिन्थ्यो तर अहिले घर भित्र नै खेलिने गेमहरु आइसक्यो । प्रविधिले गर्दा जीवनमा जे जति सिकेको भए पनि नयाँ नयाँ हुँदै जाने अनि केहि जानेकै छैन जस्तो हुने भैसक्यो ।
प्रश्न – अहिले नेपालको सफल व्यवसायीको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । संघर्ष बिना यो सम्भब पक्कै छैन तपाईको जिबनको संघर्ष कहाँबाट सुरु भयो ?
बाबुकाजी श्रेष्ठ- म एक किशानको छोरा भएकोले आमाबुबालाई खेति किसानी मा सहयोग गर्दै पढ्दै थिएँ । एस एल सी सकिए पछि सरकारी जागिर खान थालें । सडक विभागमा सुपरभाइजर भएर काम गरें पछी ड्राइभिंग त्यसपछि टाइपराइटरको काम पनि गरें ।परिवारको जेठो छोरा भएर आमाबुबालाई र भाइबहिनीलाई पनि सघाउँदै अघि बढें संघर्ष गर्दै अघि बढें ।
प्रश्न – हजुरले खेति किसानी गर्दागर्दै जागिर खाँदै गर्नुभएको व्यक्ति अनि यो सर्टिंग सुटिंगको पेशालाई कसरि अंगाल्न पुग्नु भयो ,कहिले र कसरी यस्तो सोंच आयो त ?
बाबुकाजी श्रेष्ठ- अब २०३० सालसम्म त जागिर नै गरें मात्र २/३ सयको तलब थियो । मेरो त्यति तलबले मेरो परिवारलाई खर्च धान्न अलि गाह्रो भयो । अनि तेही हुँदा खेरि मैले अरु अल्टरनेटिभ काम गरौँ अलि पैसा आउने काम गरौँ भनेर मैले यो काम सिकें अनि काम गरें । खिचापोखरीको ट्रेनिंग सेन्टरमा थेउरी सिकेर पछी अर्को टैलरिंगमा प्राक्टिकल गरेर सुरु गरें । त्यसपछि एउटा सिलाइ मेसिन राखेर सुरु गरेको संस्था अहिले ८०/९० वटा मेसिन राखेर चलाउँदै छु ।
प्रश्न – अहिले बजारमा फेन्सी आइटम पनि छन् यो सर्टिंग सुटिंगको बजार व्यवसायलाई कस्तो असर परेको छ कस्तो चुनौती थपिएको छ ?
बाबुकाजी श्रेष्ठ – फेन्सी आइटम भनेको तत्काल उपलब्ध हुने कपडा हो तर त्यो शरीरमा ठ्याकै फिट हुन्छ । भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन हामीले बनाएको सुटहरुमा चाहिं बडीमा सबै नापेर सिलाएर दिने भएर कुनै कमि कमजोरी आउंदैन । बाहिरि रेडिमेड र हामीकहाँ सिलाएकोमा धेरै अन्तर हुन्छ । फेरी सुट जस्तो कुरा जहाँ पायो तेहीं पाइने पनि होइन । त्यसमा पनि कोहि तयारी फेन्सी मात्र लाउन्छन् भने कोहि सिलाएर मात्र लगाउँछन् । फर्मल सिलाएरै लगाउने धेरै ग्राहकहरु हुनुहुन्छ तेही भएरपनि हामीकहाँ कामको कुनै कमि छैन ।
प्रश्न – समस्या हरेक क्षेत्रमा हुन्छ नै यस टेलरिंगको क्षेत्रमा के कस्तो समस्या झेल्नु भएको छ ? छन् कुनै समस्या ?
बाबुकाजी श्रेष्ठ- दिन प्रतिदिन नै समस्या त आइराख्छ । किनभने परिबर्तनशिल समाज छ । अब पहिला एक महिना जस्तोमा पनि सुट तयार गरिन्थ्यो, भने आज भोलि विहान अर्डर लिएर बेलुकी सुट तयार गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो समयमा समेत ग्राहकको आबश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नु परेको छ ।
प्रश्न – नेपाली युवा पुस्ता रोजगारका लागी विदेशिने क्रम बढ्दो छ , कसरी म्यानेज गर्नु भएको छ त म्यानपावर वोर्करहरुको ?
बाबुकाजी श्रेष्ठ- हामीले त विदेशमा काम गर्दा पनि उपलब्ध नहुने किसिमको सेवा सुविधाहरु दिएर म्यानपावरको व्यवस्था मिलाई रहेका छौं । हामीलाई म्यानपावरको कुनै समस्या छैन ।काम गरेर खानेका लागी नेपालमा जति पनि अवसर छ ।कामको लागी विदेश जानु पर्दैन स्वदेशमै बसेर परिवार ,आफन्त छरछिमेकमा आमने सामने भएर काम गरेको राम्रो हुन्छ । विदेशमा दैनिक १८ घण्टा खटेर काम गर्नुको साटो नेपालमा इमान्दारिताका साथ दिनको १२ घण्टा मात्र काम गर्दा पनि बिदेशमा भन्दा धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न – यो श्रेष्ठ टेलरिंगको व्यबसयलाई निरन्तरता दिंदै उपत्यकाको कुन कुन ठाउँ बाट सेवा दिंदै हुनुहुन्छ र श्रेष्ठ टेलरिंग भनेर नाम राख्नु भयो आफु श्रेष्ठ भएरै हो ?
बाबुकाजी श्रेष्ठ- हजुर ,हो म श्रेष्ठ परिवारमा जन्मेको मान्छे भएकोले मैले यो नाम रोजें ,र संथा दर्ता गर्दा विशेष कारणले मेरो नाम बाबुकाजी श्रेष्ठ भएको हुँदा बि.के. श्रेष्ठ टेलरिंग भनेर राखेको हुँ अहिले श्रेष्ठ टेलरिंग भनेरै सबैले चिन्छन् ।मेरो उपत्यका बाहिर कुनै शाखा उपशाखा छैन यतै उपत्यकामा ५ ठाउँमा यसको शाखा विस्तार गरिसकेको छु ।मेरो सम्पूर्ण परिवार नै यसमा लागी परेका छन् ।हाम्रो श्रेष्ठ टेलरिंगको शोरुमहरु मुख्य बागबजार , मैतिदेबी , चावहिल चोक , के एल टावर चुच्चेपाटी , त्रिपुरेस्वोरको वोर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा छन् ।स्थानीय रुपमा सेवा दिंदैं आएका छौं विदेश देखि आएर पनि हाम्रो उत्पादन लिएर जान्छन् ।अधिराज्यभर अनि इन्डिया सम्म पनि हाम्रो सेवा पुगेको छ ।
प्रश्न – सुरु देखि अहिले सम्ममा कुनै व्यापार संघ महासंघ वा संगठनमा संग्लग्न हुनुहुन्छ कि ?नेपालको ब्यापार व्यवसाय उकास्न के कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ ?
बाबुकाजी श्रेष्ठ- हजुर २०५५ सालमा मैलेनै संस्थापक भएर नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ भनेर संघ खडा गरें । अहिले पनि यो संस्था अझै छ । म अहिले यसको भू. पु. अध्यक्ष भएर रहेको छु । यो संघ अब महासंघमा जाने तरखरमा छ ।
प्रश्न – हजुरको परिवार नै यहि व्यवसायमा सम्लग्न हुनुहुन्छ नै अनि यस क्षेत्रको चुनौती र प्रतिस्पर्धा समयसंगै चल्नु पर्ने बाध्यता ,अन्तरास्ट्रिय गुणस्तर सेवा सुविधा,यी सबैकुरालाई व्यवस्थित गर्न यहाँले कति जनाको म्यानपावर लागाउनु भएको छ ?
बाबुकाजी श्रेष्ठ- मैले अहिले प्रतक्ष अप्रतक्ष रुपमा ३०० जनालाई रोजगार दिलाउँदै आइरहेको छु
प्रश्न – व्यवसायिक भ्रमण गर्नुभएको छ विदेशतिर कतै?
बाबुकाजी श्रेष्ठ- हजुर, जान्छु ।थाईलैंड ,चाइना ,ताइवान, इन्डिया गइरहन्छु । रिसर्चको लागि जान्छु । त्यहाँ कसरी थोरै समयमा धेरै काम गर्छन् ? क्वालेटी कसरि दिन्छन् ? सबै बुझ्छु र फलो गर्दै अगाडी बढ्ने गर्छु ।
प्रश्न – अन्तमा आफ्नो ग्राहक बर्ग र हाम्रा यस डर्बी का पाठक लाई के भन्नु हुन्छ ?
बाबुकाजी श्रेष्ठ- म मेरा सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने बजारमा सामान सक्कली पनि हुन्छ नक्कली पनि हुन्छ , तर सामानको गुणस्तर चिनेर सामन खरिद गर्नु । आफुलाई स्मार्ट बनाउनु ,गुणस्तर कपडा र सर्टिंग सुटिंगका लागी हामीलाई ( श्रेष्ठ टेलरिंगलाई) संधै सम्झनु भन्न चाहन्छु र अनि अब नयाँ वर्ष पनि आयो यो २०७५ को मेरो तर्फबाट सबैलाई धेरै धेरै सुभकामना दिन चाहन्छु ।
हस् ! यहाँलाई पनि नयाँ वर्ष २०७५ को मंगलमय सुभकामना दिंदै यस बार्ताका लागी आफ्नो महत्वपुर्ण समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यबाद दिन्छु ।
बाबुकाजी श्रेष्ठ – धन्यबाद यहाँलाई र डर्बी मिडियालाई पनि ।
जनकपुरमा एक महिलाले जन्माइन् चार बच्चा,बच्चाको जन्म दिएकी महिलाको मृत्यु
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाव दिएका २०० संक्रमित सम्पर्क विहिन,खोज्दै प्रहरी